Inka Badan Toban Askari American Ah Oo Lagu Dilay Gobalka Lugman. – Bogga Calamada.com
Inka Badan Toban Askari American Ah Oo Lagu Dilay Gobalka Lugman.
October 22, 2017 1:31 pm Views: 145
Weerar xoog ku gal ah ayaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Gambari Dak ee gobalka Lugman ee Bariga Afghanistan waxaa saldhiga la weeraray ku sugan ciidamada Nasaarada Mareykanka.
Weerarkan xoog ku gal ah waxaa fuliyay Ruux hubeysan kaasi oo rasaas ooda oga qaaday ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaay gudaha iyo banaanka saldhiga,weerarka waxa uu sababay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaartay askarta Mareykanka.
War rasmi ah oo kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan kuna saxiixanyahay Afhayeenka Imaarada Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid ayeey Imaaradu ku sheegatay mas,uuliyadda weerarkan lala beegsaday askarta Nasaarada Mareykanka.
Imaarada ayaa sidoo kale bayaanka ku xustay in weerarkan guuleystay uu fuliyay Mujaahid ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta deegaan ahaana kasoo jeeda degmada Khow-jiyaani ee gobalka Nangahaar ee Bariga dalka Afghanistan.
Bayaanka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lagu cadeeyay in weerarkan lagu dilay Saddex iyo Toban askari American ah laguna dhaawacay Labo kale oo isla ciidamada Mareykanka ah.
Dhanka kale Tirakoob lagu sameeyay howlgalada ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay fuliyeen bishii lasoo dhaafay ee Muxaram ayaa lagu soo bandhigay tirada howlgalada iyo tirada askarta ah ee lagu dilay.
Tirikoobkan ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islamaiga Afghanistan ay fuliyeen (660) Lix Boqol Iyo Lixdan Weerar oo isugu jira qaraxyo,dilal qorsheysan,Camaliyaat Istish-haadiyo ah,Kamiin,Duqeyn iyo Dagaallo toos ah.
Dhanka askarta Nasaarada Mareykanka waxaa howlgaladaasi looga dilay (46) Afartan Iyo Lix askari oo American ah,waxaana lagu dhaawacay (17) Toban iyo Todoba askari oo American.
Dhanka Maamulka daba dhilifka Kaabul waxaa 660-ka weerar ee dhacay bishii lasoo dhaafay ee Muxaram looga dilay (1659) Kun Lix Boqol Konton Iyo Sagaal askari waxaana laga dhaawacay (885) Sideed Boqol Sideetan Iyo Shan askari.
Dhanka gaadiidka waxaa ciidamada Nasaarada Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul laga gubay (262) Labo Boqol Lixdan Iyo Labo gaari oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka.
Dhanka Diyaaradaha waxaa ciidamada Nasaarada Mareykanka gudaha Afghanistan Bishii Muxaram looga soo riday Labo diyaaradood oo isugu jira kuwa basaaska ee duuliye la aanta ah iyo mid xamuul ah oo ciidanka iyo sahayda ay ku qaataan askarta Nasaarada Mareykanka ee duulaanka ku jooga Afghanistan.
Tirikoobkan waxa uu muujinayaa in bishii Muxaram ee dhamaatay ay ka mid tahay bilaha dhiigbaxa ugu xoogan ay la kulmen ciidamada Nasaarada Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul ee diidan in ku dhaqanka Shareecada islaamka uu ka shaqeeyo dalkaasi.
Halkan Hoose Ka Daawo Tira Koobka Bishii Muxaram.